Yintoni eyenza izixhobo zokuphilisa ama-blackberries?
I-blackberry i-half-shrub eneentsiba ezibukhali. Ngaphandle, isityalo sibonakala njengama-raspberries. Nangona kunjalo, iziqhamo zamabhereberries azikwazi ukudideka nawaphi na amanye amajikijolo - kwiimeko zabo ezivuthiweyo zifumana umthunzi omnyama kwaye zigqutywe ngeengubo eziluhlaza. Ezi zinambuzane, kunye ne-flavour ekhethekileyo yeebriji ziyancasa kakhulu, ngaphandle kokuba zinezixhobo zonyango. Kwizithelo ze-blackberry, i-carbohydrate (i-glucose, i-fructose kunye ne-sucrose), i-vitamin C, i-carotene (i-provitamin A), i-vitamin E, i-tanins kunye nezinto ezinamakha, i-acids, i-potassium, i-manganese, i-salts yethusi. Ziziphi izifo eziberoberi ezisetyenziselwa iinjongo zokwelapha?
Iipropati zokuphilisa zamabhereberries sele ziyaziwa phakathi kwabantu. Isiqhamo esitsha esivunyiwe xa sidliwa sinomsoco oqhelekileyo, sizalise ivenkile zamavithamini emzimbeni. Amajikijolo e-Blackberry aneendawo ezinqamlekileyo kwaye asetyenziselwa ukulungiselela unyango xa kwenzeka isisu sithukuthele. I-decoction eyenziwe kwizityalo ze-blackberry isetyenziswa njenge-diaphoretic.
Amacembe e-Blackberry anemveliso yeyeza. I-Decoction yamagqabi anesiphumo se-diaphoretic ne-diuretic, isetyenziselwa i-gingivitis kunye ne-stomatitis yokuhlambulula umlomo womlomo. Iimpawu zonyango ze-decoction zamacembe e-blackberry zinceda izigulane ezineengxaki zesistim neentsholongwane zeentliziyo. Ukunqunyulwa kweentyantyambo kunye namacembe ama-blackberries asetyenziselwa uhudo.
Ijusi ezivela kwiingcambu zamabhakabhaka nayo yonyango, enezakhiwo zetyholo. Isetyenziswe kunyango lwe-dropsy.
Ubusika be-Blackberry, apho iinyosi zivunwa ngexesha lokuqhutywa kwezi zityalo, zisetyenziselwa ukunyusa amayeza kubanda, kunikwa izigulane kwiimeko ezibangelwa ngumkhuhlane. Olu busuku luphelisa ukukhwehlela kwaye lunempembelelo ye-antipyretic.
Ungalungiselela njani amayeza omhlaza weqabunga lamacroberberry kunye neengcambu?
Ukunqunyulwa kwamaqabunga ama-blackberries kulungiselelwe ngale ndlela: 10 amagremu amaqabunga ahambisa enye ingilazi yamanzi abilayo, ubilise imizuzu eyi-15, uze ufune iiyure ezingama-2. Ukongezelela, umhluzi obangelwayo uhlungiwe, emva koko ulungele ukusetyenziswa kwiinjongo zokwelapha. Thatha i-decoction yamagqabi e-blackberry amaxesha amane ngosuku ngosuku lwesipuni.
Ukulungiselela umhluzi weengcambu ze-blackberry, thabatha iigremu ezili-15 zomxube omisiweyo uze uthule ama-300 amagremu amanzi abilayo. Emva kokungena kunye nokuxhathisa i-decoction enjalo isetyenziswe ngomlomo omnye wepuniji nganye iiyure ezingama-2.
Ukusuka kumabhakabhaka, unokulungiselela ezinye iimveliso ezinempilo - iisero, i-compotes, jams, njl. Nangona ebudeni bokulungiselela kwabo inxalenye enkulu yezinto eziphilayo ezisebenzayo zibhujiswa, kodwa ezi mveliso kwinqanaba elithile linamachiza.
UDmitry Parshonok , ngokukodwa kwisayithi
Glycerin unyango kunye namayeza alo
Indlela yokuLahla amandla: Iingcebiso eziwusizo
Ziziphi ukutya ongazitya ukuze ulahlekelwe isisindo?
Khetha umhlobo omhle kunye nomfesane onxibayo kwi-prom ensimini
I-Apple strudel kunye neerinki
I-tea ebomvu ngeginger
Izindlela zokuchonga isipho somntwana
Indlela yokusebenzisa i-oven. Icandelo 2